Iindaba -Ungaba kanjani nguNgcali kunye noLungileyo weLocksmith?
XK Series Wired Remote (Ngaphandle komthuthi)
I-XN Series ye-Wireless Remote (nge-transponder)
XS Series Smartkey ekude
XE Series Super Ekude
Isitshixo semoto esingenanto
Isitshixo semoto esikude
Umhlaba obuyiselwa kude
Izixhobo zeLock Lock
Inkqubo yeCar Key
Abanye – Ndicinga ukuba uya kuthanda
Ungaba kanjani nguNgcali kunye noLungileyo weLocksmith?
Yiba nezi ndlela
Imisebenzi yorhwebo ifunwa rhoqo namhlanje. Njengokuba abantu abaninzi besiba ngootitshala, oogqirha namagqwetha, bambalwa ababa ngogesi, abatywini, nabasebenza ngezitshixo. Ngapha koko, ukutshixa ishishini elinengeniso abantu abaninzi abanokungena kulo ukuba bayazi njani. Nabani na onomdla kweli candelo kufuneka azi ukuba abe ngumsebenzi wobuchule bokutshixa onjani ngokufunda kakuhle, amava omsebenzi kunye neziqinisekiso.
Njengawo nawuphi na umsebenzi wezorhwebo, kuya kufuneka uqeqeshelwe ukwenza umsebenzi wokutshixa. Oku kubandakanya ukwazi iintlobo ezahlukeneyo zokutshixa, iindlela zokutshixa, ukuvala izitshixo, ukwenza nokukopa amaqhosha, ukuqonda ukufakwa kokhuseleko oluchanekileyo, nokunye okuninzi. Uqeqesho kunye nemfundo yenzeka kwizikolo zomsebenzi okanye iikholeji zoluntu. Funda indawo yokuhlala, ukuthengisa kunye nezakhono zokutshixa izithuthi kwiiklasi ezahlukeneyo nakwiindibano zocweyo. Unokufumana uqeqesho oluthe kratya kwiinkqubo zokuqeqeshelwa umsebenzi apho uqeqesha khona phantsi kwesitshixo esinamava. Ngelixa le nkqubo inokungahlawulwa, ulwazi, izakhono, kunye namava afunyenweyo aqinisekisa ukuba ukulungele ukwenza imisebenzi yezomthetho kunye nezobugcisa.
Ezinye iindawo zifuna ukuba usebenze ixesha elithile ngaphambi kokufumana ilayisensi eyimfuneko. Kule meko, sebenzela ubuncinci unyaka omnye ngaphambi kokufaka isicelo sephepha-mvume lokutshixa. Amava aya kukunika amandla kunye nokuzinza kwemali xa ufaka isicelo sokufumana ezinye iinkcukacha. Khumbula zonke izixhobo ezifanelekileyo kunye iiseti zokutshixa ukulungiselela umsebenzi.
Fumana iLayisensi yakho
Emva koko, fumana ilayisensi yakho yokutshixa. Ngelixa ingeyiyo yonke imibutho yabasebenzi okanye umbutho wobungcali oyifunayo, oku kuqinisekisa ukuba uyaluqonda ukhuseleko kunye nemigangatho yobungcali ngokutshixa. Faka isicelo ngamaxwebhu afanelekileyo kunye nemvelaphi egqityiweyo yokujonga ukufaneleka. Unokuqhagamshelana nombutho wasekhaya wokutshixa ulwazi malunga nemigangatho yengingqi yakho.
Fumana iSatifikethi seNgcali
Emva kwayo yonke loo nto, inyathelo elilandelayo lokuba ngumkhandi wobugcisa kukufumana isatifikethi sobungcali. Iimviwo ezisekwe kwinqanaba ngalinye kwi-Locksmiths yaseMelika (ALOA) zikuvuza ngesiqinisekiso esifanelekileyo. Mane amanqanaba akhoyo ngoku onokuthi uwaphathe kakuhle: Umgcini weLocks obhalisiweyo (RL), uLlocksmith oQinisekisiweyo oBhalisiweyo (i-CRL), uLtsmith oQinisekisiweyo oQinisekisiweyo (CPL), kunye ne-Master Locksmith eqinisekisiweyo (CML). Ukuba nezi zatifikethi kunokukwenza ugqame phakathi kushishino njengabarhwebi abafanelekileyo.
Qhubeka ufunde okanye ujoyine umbutho wobugcisa
Okokugqibela, zimbini iindlela onokukhetha kuzo ukuqhubela phambili ukuthembeka kwakho: imfundo okanye umsebenzi. Abo banqwenela ukuqhubela phambili nezakhono kunye nolwazi lwabo banokuqhubeka nokufunda kwabo ngokwenza uqeqesho, izikolo ezitshixayo, izikolo zorhwebo, okanye amanye amaziko avunyiweyo. Okubaluleke ngakumbi, ukuqhubeka kwemfundo kukunceda ukuba upase iimviwo ezininzi ezonyusa ukuthembeka kwakho kubathengi. Ewe kuya kufuneka usebenze ngamanye amaxesha. Fumana ummeli wasekhaya kumbutho wobuchule bokutshixa okanye kwimanyano. Ubulungu kula maziko banokubonelela ngamathuba emfundo ngakumbi, ukumelwa ngokwasemthethweni, i-inshurensi, izibonelelo zezempilo, ukhuseleko lomsebenzi, kunye nokunye.
Ixesha Post: Dis-11-2020
Isithili seShenzhen LongHua, iNdlela ende yeHua, Isakhiwo saseTianhui. C-512